Imikhawulo yokuhamba isikhathi eside idala inkinga ngezindawo zokungcebeleka zokushushuluza e-Europe
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseYurophu » Imikhawulo yokuhamba isikhathi eside idala inkinga ngezindawo zokungcebeleka zokushushuluza e-Europe
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Sports • Ezokuvakasha • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Noma yimuphi umgwaqo ezindaweni zokungcebeleka okushibilika eqhweni kungenzeka ukuthi uvela emakethe yemithombo yasekhaya, lapho isilinganiso sokusetshenziswa kwemali sezivakashi ngasinye siphansi, okuholele ekwehleni okwengeziwe kwezezimali
Izindawo zokungcebeleka zokushushuluza e-Europe zincike kuphela esikhathini sasebusika ukuze zisinde
NgoFebhuwari esikoleni isigamu sethemu ngumthombo obalulekile wemali engenayo njengoba imindeni ifuna ukubaleka ngenkathi izingane zingekho esikoleni
Amabhizinisi amancane, asetshenziswa ngumndeni kungenzeka abe nomthelela omubi kakhulu
Imikhawulo yokuhamba isikhathi eside ingaba yisipikili sokugcina sabasebenza ngezokungcebeleka kwezinye izindawo zokungcebeleka zokushushuluza e-Europe njengoba bencike kuphela esikhathini sasebusika ukuze baphile. Yize ukumbozwa kweqhwa kungahle kungabi sezingeni eliphezulu ngasekupheleni kwesizini maphakathi noFebhuwari, isikhathi esiphakathi nesikole sikaFebhuwari ngumthombo obalulekile wemali engenayo njengoba imindeni ifuna ukubaleka ngenkathi izingane zingekho esikoleni.
Opharetha bendawo yokuvakasha bazohlupheka kakhulu. Uma kungekho zinombolo noma zehlisiwe zabahambi endaweni yokuvakasha, lapho-ke imifudlana yemali engenayo izokhawulelwa. Noma yimuphi umgwaqo kulezi zindawo zokungcebeleka okushushuluza kungenzeka ukuthi uvela emakethe yemithombo yasekhaya, lapho isilinganiso sokusetshenziswa kwemali kumvakashi ngamunye siphansi, okuholele ekwehleni okuqhubekayo kwezezimali. Amabhizinisi amancane, asetshenziswa ngumndeni kungenzeka abe nomthelela omubi kakhulu, njengoba kungamabhizinisi azimele wodwa, okusho ukuthi awakwazi ukulungisa lokhu kulahlekelwa kwenye indawo.
Izindiza ezindiza kancane, ngakolunye uhlangothi, kungenzeka zingabi nomthelela kulokhu ngenxa yeminye imithombo yemali engenayo yomhlaba. Izindiza ezindiza lezi zindawo ezidumile zokushushuluza ngokuvamile ziyakwazi ukusebenzisa izindlela zamanani ashukumisayo ukukhuphula imali yokuthenga amathikithi ngokuhambisana nalesi sidingo esikhuphukile, okuhumusha izindiza ezinenzuzo ezinokulayisha okuphezulu. Yize lokhu kungabibikho kwesidingo kuzoholela kokuphikisanayo, izindiza ezinamanani aphansi zinamandla okukhulisa inzuzo ngezinye izindlela, njengezindiza ezifuneka kakhulu, njengoba abahambi bebheka ukubhuka amaholide ehlobo kuqhubeke.
Amazwe aseYurophu anezinye izindawo zokuheha futhi ezinganciki ngokuphelele kulezi zindawo zokungcebeleka ukuze kusinde umnotho wezokuvakasha kufanele asebenzise izinhlobonhlobo zamathuba eholide akhona unyaka wonke. IFrance, okuyizwe elivakashelwa kakhulu emhlabeni, kungenzeka ibhekiswe endaweni yesithathu Covid-19 lockdown, kepha inikeza okuhehayo okungapheli kude nemithambeka engavakashelwa lapho uhambo luqala kabusha.